ဘာကြောင့် posidonia oceanica ကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသနည်း။ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
ဘာကြောင့် posidonia oceanica ကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသနည်း။
သမုဒ္ဒရာ posidonia ၎င်းကိုကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့်ယင်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုအခြေအနေတို့ကြောင့်လူသိများသည်။ posidonia oceanica ကိုသိသောသူများသို့မဟုတ်ကြားသိခဲ့သူများစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အတိအကျဤမျှအရေးကြီးသည်နှင့်၎င်းတို့တွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်ကိုအတိအကျမသိပါ။
posidonia oceanica နှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်ပထမ ဦး ဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုပင်လယ်ရေမှော်နှင့်ခွဲခြားရန်ဖြစ်သည်။ Posidonia ရေညှိမဟုတ်, ၎င်းသည်ရေအောက်စက်ရုံဖြစ်သည်။ အပင်များ၊ ပန်းများ၊ အရွက်များ၊ ပင်စည်များနှင့်ပုံမှန်အပင်များကဲ့သို့အမြစ်များရှိသည်။ ဒါဆိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဘာကြောင့်အရမ်းအရေးကြီးရတာလဲသိချင်လား။
1 သမုဒ္ဒရာ posidonia
2 သမုဒ္ဒရာ posidonia ၏အရေးပါမှုကို
3 အဘယ်အရာကို posidonia oceanica အကျိုးသက်ရောက်?
posidonia oceanica သည်ရေအောက်အပင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ပွင့်လန်းပြီးပင်လယ်သံလွင်သီးဟုခေါ်သောအသီးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် photophilic စက်ရုံဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် photosynthesis ပြုလုပ်ရန်ရေအောက်တွင်ရှိနေလျှင်ပင်နေရောင်ခြည်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ပိုဆီဒိုးနီးယားသည်ပင်လယ်ပြင်တွင်ဖြန့်ဖြူး။ ပင်လယ်မြက်မြက်မြက်မြက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
posidonia ရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာဖြစ်သည် သန့်ရှင်းသောရေကောင်းကောင်းညွှန်ပြပါ၊ စင်ကြယ်သောရေ၌သာအသက်ရှင်သောကြောင့်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ညစ်ညမ်းသည့်နေရာများ၊ အောက်စီဂျင်မရရှိခြင်း၊ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ပိုလျှံသောပစ္စည်းများနှင့်မတွန်းလှန်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်မြေထဲပင်လယ်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ယူနက်စကိုမှကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
သမုဒ္ဒရာ posidonia ၏အရေးပါမှုကို
ပင်လယ်မြက်မြက်မြက်မြက်မြက်မြက်ရြိသောအဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခု မျိုးစိတ်များစွာ၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်သင့်လျော်သောနေရင်းဒေသများထုတ်လုပ်ရန်ဇီဝလောင်စာနှင့်အောက်စီဂျင်များကိုသူတို့ပေးရမည်။ ထို့ကြောင့် posidonia သည်မျိုးစိတ်များစွာရှင်သန်ရန်အထောက်အကူပြုပါကထို phanerogams တွေ့ရှိသောကမ်းရိုးတန်းများသည်၎င်းတို့၏မတူကွဲပြားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ မျိုးစိတ်မြောက်မြားစွာပါ ၀ င်သောဂေဟစနစ်သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုနည်းပါးသည်။
posidonia ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ၊ ကမ်းခြေများကခံစားခဲ့ရသည့်တိုက်စားမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မြက်ခင်းပြင်တစ်လျှောက်တွင်လှုပ်နေသောလှိုင်းများနှင့်အတူပါလာသောအနည်အနှစ်များပမာဏကိုလျော့ချပေးခြင်းဖြင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်လှိုင်းများကိုဆန့်ကျင်သောအတားအဆီးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မြက်ခင်းပြင်သည်တစ်စတုရန်းမီတာလျှင်တစ်နေ့လျှင်အောက်စီဂျင် ၄ မှ ၂၀ လီတာအကြားထုတ်လွှတ်ပြီးမြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိအောက်ဆီဂျင်အများဆုံးရရှိသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများဆုံးထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းဤအောက်စီဂျင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ကမ္ဘာ့လေထုထဲသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။
posidonia meadows များကြောင့်ရှင်သန်နိုင်သည့်မျိုးစိတ်အရေအတွက်ကိုစတင်တွက်ချက်နိုင်လျှင်၊ ကျွန်တော်တို့မှာအပင်မျိုးစိတ် ၄၀၀ ခန့်နဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ် ၁၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ဤသတ္တဝါအားလုံးသည် posidonia meadows တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များကိုထိန်းသိမ်းလိုပါကဤမြက်ခင်းများထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မြက်ခင်းပြင်များမှာရေမြှုပ်ကောင်များ၊ ကြယ်ငါးပွင့်များ၊ mollusks များ၊ ရာနှင့်ချီသောငါးများ၊
posidonia Meadows တွင်မျိုးပွားနိုင်သောမျိုးစိတ်များစွာသည်စီးပွားဖြစ်အကျိုးစီးပွားများပြားသောကြောင့်သူတို့၏ပျက်စီးခြင်းသည်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း မှနေ၍ ဒေသန္တရစီးပွားရေးတွင်ကြီးမားသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရေငုပ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် posidonia meadows များပျက်စီးခြင်းနှင့်လည်းများစွာအရေးပါသည်။ မြက်ခင်းများထုတ်လုပ်မှုသည်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် သူတို့သည်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ဟက်တာလျှင်ယူရို ၁၄၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကို posidonia oceanica အကျိုးသက်ရောက်?
လူတို့အပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုများကြောင့်မြက်ပင်များပျက်စီးခြင်းသည်အလွန်လျင်မြန်စွာရှိနေသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမြေအောက်ရေများညစ်ညမ်းခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်များပိုလျှံခြင်း (စက်ရုံ၏မှန်ကန်သောကြီးထွားမှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ခြင်း) နှင့်မြေထဲပင်လယ်၏ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပူနွေးလာမှုစသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် posidonia meadows များကိုဖျက်ဆီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ဖြစ်သည်။ ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီပြီးနောက်, သေဆုံးမှုနှုန်းသည်အလွန်ကြီးလွန်းသဖြင့်ကြီးထွားမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမပေးနိုင်ပါအလွန်အမင်းနှေးကွေးသောအရာ။
posidonia Meadows များကိုအများဆုံးဖျက်ဆီးသောလူ့လုပ်ရပ်တစ်ခုမှာတရားမဝင်လှောင်ပြောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းဆောက်လုပ်ရေး၊ ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ရေညှိများစသည်တို့မှသတ္တုများကိုသောင်တူးခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အပျက်အစီးများမှလည်းဖျက်ဆီးပစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » ဘာကြောင့် posidonia oceanica ကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသနည်း။